के हो निपा भाइरस ? केरलामा ९ जनाको मृत्यु
यसरी बच्न सकिन्छ संक्रमणबाट, औषधि पत्ता लागेको छैन
| 2018-05-22 Published
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ । भारतको दक्षिणी राज्य केरलामा खतरनाक निपा भाइरसका कारण कम्तीमा ९ जनाको मृत्यु भएको छ ।
अधिकारीहरूले १५ दिनयता अन्य ३ जनामा भाइसरको संक्रमण पुष्टि भएको बताए । उनीहरूले अन्य ६ जनाबाट लिइएको नमुनाबारे अनुसन्धान भइरहेका जनाएका छन् । कोजिकोडे क्षेत्रका अधिकारीहरूले कम्तीमा २५ जना मानिसमा निपाको लक्षण देखिएपछि अस्पतालमा भर्ना गरिएको जनाएका छन् ।
के हो निपा ? यस्तो छ निपाको इतिहास
निपा संक्रमित मानिसमा ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, श्वासप्रश्वासमा समस्या देखापर्ने, बढी निद्रा लाग्ने तथा मानिसक समस्या देखा पर्छन् ।
पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको निपा भाइरस खासगरी जनावरहरूबाट मानिसमा सर्ने गर्छ । वैज्ञानिकहरूका अनुसार निपा भाइरसको संक्रमण एक प्रकारको चमेरोबाट सुरु भएको हो ।
निपाको पहिलो संक्रमण सन् १९९९ मा सिंगापुर र मलेसियाका सुँगुर फार्ममा काम गर्ने मानिसमा फैलिएको इन्सेफ्लाइटिस तथा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी महामारीका बेला देखा परेको थियो ।
त्यतिबेला करिब ३ सय जना मानिसमा फैलिएको निपाका कारण सयभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो । संक्रमण थप फैलिन नदिन करिब १० लाख सुँगुर नष्ट गरिएका थिए ।
कसरी सर्छ निपा भाइरस निपा संक्रमण ?
खासगरी जनावरबाट मानिसमा सर्ने गर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले आगामी सम्भावित ठूला महामारीका रूपमा सूचीकृत कारकमध्ये निपा भाइरस पनि एक हो । स्वास्थ्य अधिकारीले संक्रमणबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको बताए ।
स्वास्थ्य अधिकारीले मृत्यु भएका ३ जनाका घरमा चमेरोले टोकेका आँपका भेटिएको बताएका छन् । केरालाका स्वास्थ्य सचिव राजीव सदानन्दनले भने, ‘हामीले पुनेस्थित नेसनल इन्स्टिच्युट अफ भाइरोलजीमा थप परीक्षणका लागि संक्रमितको रगत तथा अन्य नमुना पठाएका छौं ।’
सदानन्दनले हालसम्म ३ जनाको निपा भाइरसका कारण मृत्यु भएको परीक्षणमा पुष्टि भएको जनाए ।
उनले भने, ‘भाइरसको संक्रमण सहयोगी मात्र हुने भएकाले थप फैलन नदिन उच्च सतर्कता अपनाइएको छ ।’
कसरी बच्ने निपा भाइरसबाट ?
स्वास्थ्य अधिकारीका अनुसार यस रोगको संक्रमणबाट बच्न सुँगुर तथा चमेरोबाट टाढै बस्नुपर्छ । कम्तीमा ७० प्रतिशत मृत्युदर रहेको निपाको उपचारका लागि हालसम्म कुनै खोपको आविष्कार भएको छैन ।
कान्तिपुर दैनिकको सहयोगमा
मंगलबार ८, जेठ ०७५